Daawo: Shirka golaha wasiirada oo maanta xasaasi ahaay iyo wasiirada oo loo qeybiyay warqaddo ay…. – Kismaayo24 News Agency
Daawo: Shirka golaha wasiirada oo maanta xasaasi ahaay iyo wasiirada oo loo qeybiyay warqaddo ay….
by Tifaftiraha K24 24th August 2017 024
Dowladda soomalia oo boqortooyada sacuudiga kala hadashay dhoofinta xoolaha soomalia. (Sawirro)
XOG: Qatar iyo Taakulaynta Aragagexisada
Daawo: Farmaajo qaabkee ceenkee ah ayaa looga sii sagootiyay garoonka aadan cadde markuu u dhoofay wadanka turkiga?
Tifaftiraha K24 25th April 2017
War hada: Senatorkii Ugu horeeyay Aqalka Sare ee Soomaliland oo Goordhaw la doortay yaase kusoo baxay??+Magaciisa:
Tifaftiraha K24 8th January 2017 8th January 2017
LIVE: Toos u Daawo Dacwada Badda ee Soomaaliya iyo Kenya oo ka socota magaalada Hague
Tifaftiraha K24 19th September 2016 19th September 2016